Ny fanohanana ny TrueCrypt sy ny veracrypt ao amin'ny Tails 3.9 dia ho tonga amin'ny 5 septambra | Avy amin'ny Linux
Ireo mpamorona ny rafitra fiasan'ny Linux Tails dia miasa amin'ny izay ho kinova vaovao amin'ny rafitra izay ho ny andiany 3.9 ny Tail izay nandritra ny andro farany ny sasany amin'ireo fiasa vaovao sy ny fanovana izay efa nambara ny rafitra.
Amin'izao fotoana izao ianao dia afaka mahafantatra kely ny asa izay tanterahina ao amin'ny Tails, miaraka amin'ny Release Candidate Tails RC 1, izay antenaina hivoaka amin'ny 5 septambra amin'ny taona ankehitriny ny kinova miorina.
Ho an'ireo mpamaky izay a tsy mahalala rambony (Ny rafitra mivantana Amnesic Incognito) Azoko lazaina aminao fa fizarana Linux natao hikajiana ny tsiambaratelon'ny mpampiasa sy ny anarany.
Ity dia fizarana Linux izay dia miorina amin'i Debian GNU / Linux, amin'ny fifandraisana ivelany rehetra voaroaka amin'ny alàlan'ny Tor.
Ny rafitra dia natao hoentina ho CD na USB mivantana nefa tsy mamela soritry ny fitehirizana eo an-toerana (matetika kapila mafy) raha tsy voalaza mazava.
1 TrueCrypt sy veracrypt dia ho tonga miaraka amin'ny kinova Tails vaovao
2 Misintona ary manandrama ny tail 3.9
TrueCrypt sy veracrypt dia ho tonga miaraka amin'ny kinova Tails vaovao
Rafitra fandidiana Ny ekipa dia handray kinova vaovao amin'ny volana manaraka, izay hitondra fiasa vaovao vitsivitsy, fanamboarana bug ary fiarovana, ary indrindra ny fanavaozana ireo fitaovana mandrafitra ny rafitra.
Ny kinova Tails vaovao dia ho ny kinova 3.9, izay eo am-pivoarana izao miaraka amin'ny Kandidà Famoahana izay azo ampiasaina amin'ny fitsapana ampahibemaso.
Anisan'ireo fanovana vaovao andrasana amin'ity famoahana ny Tails 3.9 ity, mikasa ny hampihatra ilay mpamorona fizarana fanampiana amin'ny fanokafana kapila voahodina veracrypt amin'ny birao GNOME, izay ampiasain'ny default amin'ny Tails.
Ny Tails 3.9 dia mampanantena fa ho ny andiany voalohany navoaka miaraka amin'ny fanohanan'ny veracrypt, saingy toa izany ihany koa fanampiana amin'ny fanokafana ny volan'ny TrueCrypt nafenina mivantana avy amin'ny birao GNOME.
Ho fanampin'izay, ity famotsorana ity dia hahitana ny endri-javatra 'fonosana rindrambaiko fanampiny' amin'ny birao.
Ity kinova ity dia mikasa ihany koa hanavao ny interface fifampiresahana "Configure Persistent Volume" ary hitondra ny fanavaozana ny lozisialy farany indrindra, ao anatin'izany ny browser system, izay ny TOR Browser no misy azy, mankany amin'ny kinova 8.0 (miorina amin'ny Mozilla Firefox 60 ESR), ny mpanjifa / mpizara dia miditra amin'ny tsy fantatra anarana ny tamba-jotra Tor 0.3.4.6, ary koa ny mailaka Mozilla Thunderbird 60 ary mpanjifa vaovao.
Amin'ny ankapobeny avy amin'ny Ireto misy fanovana sy fanavaozana izay navoaka:
Ampidiro ny fonosana rindrambaiko fanampiny tafiditra ao amin'ny birao sy ny fanavaozana ny interface an'ny "Persistent Volume Configuration".
Tohano ny famohana ny volan'ny TrueCrypt sy veracrypt voahodidin'ny birao amin'ny birao.
Tor Browser fanavaozana ny 8.0a9, miorina amin'ny Firefox 60 ESR.
Fanavaozana Thunderbird mankany 60.0b10.
Hatsarao ny fanohanan'ny fitaovana: havaozy ny mpamily sary, firmware ary havaozy Linux ho 4.17.
Fanavaozana tor mankany 0.3.4.6-rc.
Noho ny antony ara-piarovana dia hesorina ao amin'ny rafitra ny fakan'ny Liferea sy ny mpamaky RSS amin'ny faran'ny taona 2018. Noho izany dia ampirisihina hanomboka hifindra any amin'ny Thunderbird ny fahana rehetra misy anao.
Ny kinova farany an'ny rafitra fiasa Tails 3.9 dia amin'ny fiandohan'ny volana manaraka, izay ny tena marina dia ny 5 septambra 2018, amin'ny andro izay namoahan'ny Tetikasa GNOME ny kinova vaovao an'ny tontolon'ny birao GNOME 3.30.
Na dia mampiasa ny Gnome aza ny Tails dia nanambara fa ny famoahana ny rafitra manaraka dia ho avy miaraka amin'ny tontolon'ny birao GNOME 3.28.
Misintona ary manandrama ny tail 3.9
Araka ny voalaza, Amin'izao fotoana izao dia azo atao ny mizaha toetra ny kinova Release Candidate an'ny rafitra, izay hahafahan'izy ireo manohana ny fikarohana sy ny tatitra momba ny lesoka hita ao anatin'ity kinova fitsapana ity.
Na izany aza, tokony ho ao an-tsain'izy ireo fa kinova voalohany izay tsy tokony hapetraka amin'ny tontolon'ny famokarana na ny rafitra mikasa ny hampiasaina isan'andro, tsara ny manao ny fitsapana amin'ny milina virtoaly.
Rohy fampidinana ity manaraka ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Ny fanohanana ny TrueCrypt sy ny veracrypt ao amin'ny Tails 3.9 dia ho tonga amin'ny 5 septambra